MAHATOKY NY LANJAN’NY FILOHA RAVALOMANANANA ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
MAHATOKY NY LANJAN’NY FILOHA RAVALOMANANANA ISIKA
Mitohy hatrany etsy amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka androany, ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Ny Ct Feno dia nampita tamin’ny vahoaka teny an-toerana ny sms voarainy avy amin’ny Ct Patrice avy any Mahajanga, izay nilaza fa niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tany antoerana ny filoha Ravalomanana, ny faran’ny herinandro teo. Nilaza izy hoy ny sms fa tsy hoe la dia hotonga ny tenany. Ankoatra izay dia nambaran’i Feno fa ny andininy faha 16 ao amin’ny tondrozotra dia tsy novakian’ingahy Manantsoa rehefa mamaky izany izy. Io rangahy io hoy Feno dia tsy nitsahatra nanenjika ny filoha Ravalomanana foana. Tsy tokony hisy hoy izy ny izany manana fahefana manokana izany, fa tetezamita hiarahamitantana no ataontsika. Isika hoy ity olomboatendry ity, dia mahatoky ny lanjan’ny filoha Ravalomanana. Ny fat hoy izy dia tsy manana izay fahatokisan-tena izay intsony. Andriamatoa Fidison avy amin’ny ankolafy Zafy kosa dia niresaka mahakasika ny asa dahalo any Atsimo izay nalaza tato ho ato, indrindra ilay nahafatesana olona 86. Tsy dahalo hoy Fidison, ireo fa nisy ilay toerana misy vato hanaovana simenitra any an-toerana. Tsy mey miala tao ireo tovolahy satria lasan’ny frantsay io toerana io. Notifirina ireo olona ireo hoy izy, dia lazaina fa dahalo. Na olon-tsotra na dahalo dia rà Malagasy no latsaka ka tsy ekena intsony ny fitondran’ny lavasanga. Nambaran’ity mpanao politika ity, ihany koa fa hiakatra ny saran-dalna atsy ho atsy. Fandrangitana antsika no ataon’ny fat hoy izy mba hisakanana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eto. Lany lainga Rajoelina satria nahazo daroka tany Maputo. Nilaza i Fidison fa misy hatrany ny halatra sy antsonjay ataon’ny fat amin’izoa fotoana izao. Ny dadatoako hoy izy dia niharan’izany. Fiara iray no nanaovan’ireo miaramila bemidina saika hangalarina. Miaramilan’ny Fis efatra hoy izy no tonga tany, ary nilaza fa eto aty atakalo io fiara io fa tsy azo ampiasaina eto. Rehefa tsy mety ianao hoy izy ireo tamin’ilay dadatoako dia ataonay amin’ny fanaovana azy. Rehefa niantsoan’i Camille Vital hoy izy io dadatoako io dia nirifatra nitsoaka ireo Fis ireo. Nanome laharana antso an-tariby izy ireo kanefa rehefa nantsoina dia tsy mandeha izany, ary ny tao Ambohitsorohitra dia niteny fa tsy misy manana io laharana io. Ny antsika hoy Fidison dia tolona am-pahamarinana , ka izay hahatongavan’ny filoha Ravalomanana Marc sy ny hiverenan’ny ara-dalàna no tanjona.
4 pensées sur “MAHATOKY NY LANJAN’NY FILOHA RAVALOMANANANA ISIKA”
Zah koa ho aho vô naheno an’io resaka dahalo maty io, d lasa avy hatrany ny heritreritro hoe mety tsy tena dahalo daholo ireo annnn! fa olona n-eliminer-na hahazoan-javatra na zavatra hafa maizimaizina,
Tokony hatao ny fitoriana amin’ny TPI ! Mila ny fandraisan’andraikitrareo Diaspora ny Malagasy. Miangavy anareo GTT mba hanadiady an’io zava-mitranga io fa mijaly ny mponina
ny dadatoan’ny Fidison sy ny fianakaviany kay akaman’ny Camille Vital hi!hi!hi!.
Tsy misy zavatra mari-pototra mihintsy ny kabary ny magrrr.
5 septembre 2012 à 3 h 02 min
MOA VE IREO » MI-NI-NI SY MIHANIHANY » DIA HASAKANA IZAY TE-HILATSAKA HO FIDIANA ?
Inona moa ny fomba tsy nampiasain’ireo mpanohitra ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC mba anilihana , anesorana azy tsy hisahana ny fitondrana ny Firenena , izy ireo dia tsy nihamhamba nikasa namono azy fa saingy tratra ilay tetika saika nampiarina teny IVATO tamin’ny alin’ny 17-18 novembre 2006 ,tapa-bolana nialoha ny fifidianana izay natao ny 03 décembre 2006…
Teo dia tsy nitsahatra ny fanozongozanana ny Fitondrana ary dia niafara tamin’ny fanonganam-panjakana ..tsy nanjary fa ilay nanongana dia voatery nihaona tamin’ilay nahongana nefa tsy lavo na nianjera..toa ny mpihaza nihaona amin’ilay bitro tsy maty vonoina !
Dia ireo tsy manaiky ny hikasihan’ny Filoha-pirenena RAVALOMANANA MARC ny raharaha politique-n’ny MADAGASIKARA dia tsy tahotra , sy henatra izy ireo dia notambazana vola ny Filoha ! Tsy raikitra izany varotra izany dia voatery niezaka sy nanasarotra ny fiverenan’ny Filoha eto ANTANINDRAZANA mba tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Filoha-pirenena . Notoriana , notsaraina nefa tsy mahefa ilay ambara-tonga-pitsarana satria tsy mfanentana amin’ny laharan’ny Filoha-pirenena !
Dia namboamboarina ny tondrozotra ( feuille de route ) ka nokitikitian’izy ireo ny amnistie ,izay tsy mahakasika ny filohan’ny Firenena RAVALOMANANA izay tsy niharana sazy atramin’ny maha Filoha-pirenena azy ka atrizao..Dia rava koa iny paika iny
Ny SADC moa efa nilaza fa mahazo mody ANTANINDRAZANA tdy misy fepetra ny
Filoha RAVALOMANANA MARC..
Dia mandeha ny revigadran’ireto matahotra ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA ary ny fandraisana anjara amin’iny fifidianana izay ho Filoha-pirenena ary namaky loha izy ireo mamorona fiteny vaqvao ,izany ni..ni (izay teny frantsay entina milaza fa tsy manaiky na ranona na i ranona ,koa tokony hoe » na..na » no fiteny mety entina manda na ny candidaturen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC na ny candidature -drajoelina !
Fa inona no anton’io fandavana ny fandraisan’ny Filphan’ny Firenenena anjara amin’ny fifidianana izay ho Filoha-pirenena ?
Marina fa raha milatsaka ho fidiana ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia tsy hisalasala ny mpifidy eo amin’ny 80 isan-jatony hifidy ny Filoha !
Ary raha tsy mandray anjara izy , dia izay canddat misolo azy dia ho lanian’ny mpifidy eo amin’ny 60 isan-jatony eo nho eo !
Ary izany no porofo fa tsy misy mpanohitra azo antoka ,manana ainga-panahy , manana heri-tsaina manana vinavina-toe-karena , vinavina-piaina vaovao mba hanatsarana y fiaraha-monina ..
Ireto lazaina hoe mpanohitra dia ireo matahotra ny fiverenan’ny Filohan’ny Firenena , ary mifikitra amin’io fitondrana nateraky ny fanonganam-panjakana , izay miavaka amin’ny tsy fisian’ny fampiarana ny Làlana ,izay miafina ao ambaiky ny dekaka sy ny vono vorona sy ny sekosekon-drajoelina !
Raha mihetsika ny Vahoaka dia tsipindy kely fotsiny dia miodana io trano miorina eo ambonn’ny fasika !
Izany hoe tsy hisy mpanohitra ho voafdy raha mandray anjara amin’ny fifidianana na tsia ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC !
IO TOE-JAVATRA IO – NY TSY FANEKEN’NY MALAGASY HIFIDY IREO MPANOHITRA6 IZAY NISEHO TAMIN’NY 16 DECEMBRE 2001 , TAMIN’NY 03 DECEMBRE 2006 NO ANISAN’NY FOTOTRY NY FANONGANAM-PANJAKANA SATRIA TSY HO HAFAKA HIVERINA EO AMIN4NY FITONDRANA IREO MPANOHITRA RAHA NY FIFIDIANANA NO HANDRASANY SATRIA LEO SY TOFOKA TAMIN’NY FITONDRANA TALOHAN’NY DECEMBRE 2001 NY MALAGASY .
ARY HIVERINA IZANY FANDAVAN’NY MALAGASY HIFIDY IRETO MPANONGAM-PANJAKANA IZAY TSY IZA FA IREO MPANOHITRA VERY SEZA SY FIHINANANA TAMIN’NY NIFIDIANAN ‘ NY MALAGASY NY « CANDIDAT »FILOHA RAVALOMANANA MARC HO FILOHAN’NY FIRENENA TAMIN’NY FIHODINANA VOALOHANY AVY HATRANY !
Tsy kinanga na sangisangy na kitoatoa na eboebo na sekoseko io fa tena safidy marina sy nosainina lalina !Ary tsy diso ny Mpifidy fa tena nifanaraka tamin’ny fiheverany ny fijerin’ny Filohan’ny firenena nofinidiny ny asa tsy maintsy hatao dia ny fandraisan’ny Rehetra andraikitra eo amin’ny fampandrosoana ny Firenena sy ny fanatsara ny farim-piainan’ny Malagasy ,indrindra ireo Tantsaha tsy nisy niahy nandritry ny efa-polo taona nahazoana ny fahaleovan-tena !
ANKEHITRINY DIA BOLA IZANY NO PROGRAMA IMASOAN’NY MALAGASY TARIHIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !
Ny olona mampiasa ny na i..na i..dia tsy azo heverna fa tsy manan-tsaina ,ary indrindra tsy manaja ny démocratie satria tsy ny feon’olom-bitsy « mi-ni-ni na mihanihany » no hasakana ny fandraisan-drajoelina na ny fandraisaina anjara ny Filohan’ny firenena RAVALOMANANA MARC amin’ny fifidianana
Ireto lazaina hoe mpanohitra dia ireo matahotra ny fiverenan’ny Filohan’ny Firenena , ary mifikitra amin’io fitondrana nateraky ny fanonganam-panjakana , izay miavaka amin’ny tsy fisian’ny fampiarana ny Làlana ,izay miafina ao ambadky ny dekaka sy ny vono vorona sy ny sekosekon-drajoelina !
Ireto lazaina hoe mpanohitra dia ireo matahotra ny fiverenan’ny Filohan’ny Firenena , ary mifikitra amin’io fitondrana nateraky ny fanonganam-panjakana , izay miavaka amin’ny tsy fisian’ny fampiarana ny Làlana ,izay miafina ao ambadiky ny dehaka sy ny vono vorona sy ny sekosekon-drajoelina !
Raha mihetsika ny Vahoaka dia tsipindy kely fotsiny dia mirodana io trano nahorina eo ambonn’ny fasika !
Aoka Isika tsy ho mety ho rebirebena ny fohy fisainana toa ireny , ary tssy ny olona toa ireny no mendrika hifanina amin’ny Filohan’ny FIRENENA RAVALOMANANA MARC amin’ny fifidianana izay ho Filoha-pirenena !
Fahafahan’ny tsirairay ny fahazoana milatsaka ho fidiana…..!
Précédent Article précédent : Fitsaram-bahoaka : mariky ny tany tsy tan-dàlana
Suivant Article suivant : Filoha RAVALOMANANA TAO AMBOSITRA : HOAVY TSY HO ELA AHO